Dr. Gobinda Kc Archives - नेपाल आज
Dr. Gobinda Kc	समाचार
फरक विकल्पसहित आन्दोलनमा जाने डा केसीको चेतावनी
Posted on: February 1, 2017February 1, 2017Posted by: netra
माघ – १९ । सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सरकारले सहमती कार्यान्वन नगरे फरक विकल्पसहित आन्दोलनमा जाने डा केसीले चेतावनी दिएका छन् । अनसनमा भएको सम्झौताअनुसार दुई साताभित्र गठन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिस समिति, न्यायिक छानविन आयोग र नागरिक अनुगमन समिति अझैसम्म गठन नभएकोमा उनले […]
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलार्इ डा केसीकाे तीन हप्ते अल्टिमेटम
Posted on: January 7, 2017Posted by: netra
पुस – २३ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा डा गोविन्द केसीले सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन हप्ताको समय दिएका छन्। शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रा डा केसीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आफूसँग भएको सहमति विपरीत विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकार आइओएम फ्याकल्टी बोर्डबाट हटाएको भन्दै विरोध गरेका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा रामकण्ठ […]
डा केसीका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन
Posted on: December 1, 2016Posted by: netra
मंसिर – १६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिकित्सक डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न बिहीबार शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बोलाएर निर्देशन दिएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १९ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि […]
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नवलपुर क्षेत्रका स्वास्थ सस्था एक घन्टा बन्द
Posted on: December 1, 2016Posted by: Tirtha Khanal
डा. गोविन्द केसी समर्थनमा नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रका स्वास्थ सस्था एक घन्टा बन्द हुने भएका छन । नेपाल मेडिकल एसोसियसन तथा आन्दोलनरत सस्थाहरुको आब्हानमा कवासोती मेडिकल सोसाइटीले नवलपुर क्षेत्रका सम्पुर्ण सरकारी अस्पताल सपोलिक्लिनिक तथा मेडिकल विहान १० देखि ११ वजे सम्म वन्द हुने जनएको छ । १९औ दिन सम्म १० औ पटक आमरन अनसन वस्दा पनि […]
डा. केसीको अनसन तोडाउन स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल
Posted on: December 1, 2016December 1, 2016Posted by: Tirtha Khanal
मंसिर १६ । आमरण अनसनरत डा गोविन्द केसीको अनसन तोडाउने बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा र शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले छलफल गरेका छन् । सरकारी पक्ष र डा केसी पक्षकावीचमा केहीदिनदेखि भईरहेको बार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्री थापाले निकाल निकाल्नका लागि शिक्षा मन्त्री पौडेललाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको मन्त्री थापाका […]
डा केसीको माग पूरा गराउन गोदानको २४ घन्टे अल्टिमेटम
Posted on: November 30, 2016Posted by: netra
मंसिर – १५ । डा प्रा गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । मेडिकल क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अठार दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका डा. केसीको माग सरकारले छिटो सम्बोधन गरिदिनु पर्ने भन्दै गोदानले सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो । सो समयभित्र दुवै पक्षबीच सहमति नभए […]
डा. केसीको अनसन आज अठारौं दिन, सरकार उदासीन
Posted on: November 30, 2016Posted by: Tirtha Khanal
मंसिर १५ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका माग राखेर आमरण अनशनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गए पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले ज्यानै जोखिममा परेको बताउदा पनि सरकारी वार्ता टोली प्रमुख मागमा झन् कठोर बनेको हो । मन्त्रिपरिषदले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको समेत चार दिन […]
केसीको जीवन जोगाउन डिनलाई राजीनामा गराउने प्रयासमा गगन थापा
Posted on: November 29, 2016November 29, 2016Posted by: Tirtha Khanal
१७ दिन देखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिसँग वार्तामा रहेको सरकारी टोलीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा. केशवप्रसाद सिंहलाई राजीनामा गर्न आग्रह गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहलाई हटाएर वरिष्ठताका आधारमा डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाललाई डिन नियुक्त गर्न निर्देशन दिएपछि वार्ता टोलीले सिंहलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने भएको स्रोतले जनाएको छ । […]
दोस्रो दिनको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन, डा केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्द
Posted on: November 28, 2016Posted by: netra
मंसिर – १३ । प्रा डा गोविन्द केसी र सरकारका प्रतिनिधिबीचको वार्ता दोस्रो दिनपनि निष्कर्षविहीन भएको छ । त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनिया र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका नवनियुक्त डिन डा केपी सिंहको राजीनामाबारे सरकारी पक्षले सम्बोधन गर्न नसेपछि सोमबारको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको हो । चिकित्सा शिक्षा र सेवासँग सम्बद्ध १० बुँदे मागसहित १७ औं दनदेखि […]
केसीको जवीनरक्षाका लागि सार्थक वार्ता गर्न सरकारसंग आग्रह
मंसिर – १३ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रको माग राखी आन्दोलनरत डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सार्थक वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आज प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै विरोधको स्वरुप जस्तोसुकै भए पनि डा केसीको स्वास्थ्योपचार जीवनको अधिकारसँग जोडिएकाले निजको जीवन रक्षाप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए […]
डा केसीसँग वार्ता गर्न दुई सदस्यीय टोली गठन
Posted on: November 26, 2016Posted by: netra
मंसिर – ११ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै १४ दिनदेखि प्रा डा गाविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गेको छ । अनसनमा बसेका केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट शिक्षा र स्वास्थ्य सचिव रहेको दुई सदस्यीय वार्टा टोली गठन गरिएको हो । यता चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले एमबीबीएस र बीडीएसको […]
डिन नियुक्त गर्न डा केसीले दिए २४ घण्टे अल्टिमेट
Posted on: November 9, 2016Posted by: netra
कात्तिक – २४ । प्रा डा गोविन्द केसीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्त गर्न २४ घण्टे अल्टिमेट दिएका छन् । बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै भोलिसम्म डिन नियुक्त गर्न माग गरेका हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा समेत रहेका केसीे चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थाको डिन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न माग राखेका छन् । त्यस्तै अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको […]
शिक्षा मन्त्री र डा केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता असफल
Posted on: October 5, 2016Posted by: Tirtha Khanal
असोज १९ । शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता भएको छ । शिक्षामन्त्री पौडेल र डा. केसीका प्रतिनिधि डा. जीवन क्षेत्रीसहितको टोलीबीच मङ्गलबार राति अबेरसम्म मन्त्री निवास हरिहरभवन, पुल्चोकमा भेटवार्ता भएको हो । डा. केसीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन तथा अनशन तोड्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएपनि सहमति नभएको मन्त्री पौडेलका […]
डा.गोविन्द केसीको अनशन एक हप्तापछि सर्याे
Posted on: September 19, 2016September 19, 2016Posted by: netra
असाेज – ३ । डा. गोविन्द केसीले सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सोमबारदेखि अनशन बस्ने घोषणलाई एक हप्ता पछि सारेका छन् । केसीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनशन एक हप्ता पछाडि सारेका हुन् । सरकारले ४ मध्ये तीन बुँदा कार्यान्वयन गर्ने लिखित खाका प्रस्तुत गरेपछि केसीले अनशनलाई एक हप्ता सारेका बताए । केसीले विज्ञप्तिमा भनेका […]
डा केसीद्वारा ३ सय भन्दाबढी बिरामीकाे उपचार
Posted on: September 16, 2016September 16, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
भदाै – ३१ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा केसी झोलामा औषधि बोकेर बुधबार रोल्पा पुगेका थिए । शिविर सम्पन्नपछि उनी बिहानै बसबाट काठमाडौँ फर्किएका स्वास्थ्य केन्द्र सुलिचौरका प्रमुख डा मिलन बज्राचार्यले बताएका हुन् । अन्य समयमा दैनिक ३० देखि ४० जना बिरामी आउने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा शिविरका दिन बिरामीको भिड नै लागेको डा […]
अनसन बस्ने चेतावनी दिएका डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
भदौ २८ डा. गोविन्द केसीका मागबा बारेमा माथेमा आयोगसंग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलसंग छलफल भएको बुझिएको छ । आफ्नो मागको संबोधन नभए अर्को हप्ताबाट अनसनमा बस्ने डा. गोविन्द केसीको चेतावनी पछि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा […]
डा केसीद्वारा अाफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई ८ दिनकाे अल्टीमेटम
Posted on: September 10, 2016September 10, 2016Posted by: nishesh
भदौ २५ । डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई ८ दिने अल्टिमेटम दिंदै माग पूरा नभए नवौं पटक अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । उनले असोज २ गतेसम्म आफ्नो माग पूरा नभए असोज ३ गतेदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले विभिन्न चरणमा आफूसंग गरेको प्रतिबद्धता तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको […]
स्वास्थ्य मन्त्री थापा र डा केसीबीच भेटवार्ता
Posted on: September 2, 2016Posted by: netra
भदाै – १७ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले शुक्रबार डा गोविन्द केसीलाई भेट गरी उनको मागका र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विषयमा छलफल गरेका छन् । शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज पुगी मन्त्री थापाले डा केसीलाई भेट गरेका हुन् । भेटका क्रममा डा केसीले आफूले उठाएका मागका विषयमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए […]
डा केसीले दिए पुनः अनशन बस्ने चेतावनी
Posted on: August 31, 2016Posted by: netra
भदाै – १५ । डा गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सहमती नभए नवौँ पटक आमरण अनशन बस्ने चेनावनी दिएका छन् । अव दुई साता सरकारको बाटो हेर्ने, वास्ता नगरे पुनः अनशन बस्ने बताएका हुन । मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको ‘लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणमा सत्याग्रहको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै डा अल्टिमेटम दिएर अनशन बस्ने चेनावनी दिएका हुन् । […]
डा केसी आफ्ना समर्थक सहित प्रधानमन्त्री निवास
Posted on: August 20, 2016Posted by: netra
भदौ – ४ । डा गोविन्द केसी आफ्ना समर्थक सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् । उनको आठौँ अनशनका क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन लागि दवाव दिन सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्सले धर्ना कार्यक्रममा आयोजना गरेको हो । ११ बजेबाट सुरु भएको धर्नामा सयौँ मासिनहरु सहभागी भएका छन् । डा केसीले सरकारले आफुसँग […]
डा केसीको समर्थन गर्दै अलायन्सले बालुवाटार अगाडि धर्ना दिने
Posted on: August 19, 2016August 19, 2016Posted by: nishesh
भदौ – ३ । डा गोविन्द केसीका मागलाई समर्थन गर्दै सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्सको आयोजनामा भालि शनिबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धर्ना दिन भएको छ । अलायन्सले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गदै धर्ना कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिएको हो । डा. केसीसगै भोलिको धर्नामा लेखक खगेन्द्र संग्रौला, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, आर्टिस्ट किरण […]
फेरि अान्दाेलन गर्ने डा केसीकाे चेतावनी
Posted on: August 17, 2016August 17, 2016Posted by: netra
भदाै – १ । डा गाेविन्द केसीले फेरि अान्दाेलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी केसीले आफूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले आफूसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको भन्दै डा केसीले अाराेप लगाएका छन् । यस्तै स्थिति कायम रहे फेरि आन्दोलन गर्ने बताएका डा केसीले बताए । उनले […]
डुबानको महिना दिन पुग्न लाग्दा डा. रिजालको टोली सप्तरी जाँदै
Posted on: August 10, 2016Posted by: netra
साउन – २६ । डा. भोला रिजालको टोली सप्तरी जाने भएको छ । सप्तरीको डुबानको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा टोली सप्तरी जान लागेको हो । अनशनबाट नतंग्रिदै डा. गोविन्द केसी उपचारका लागि सप्तरी पुगेका थिए । डा. केसी भने सप्तरीबाट फर्किसकेका छन् । डा. केसी सप्तरीमा बाढी पीडितहरुको उपचार र स्वास्थ्य सम्बन्धि जनचेतना फैलाएपछि […]
बेथितिविरुद्ध गोविन्द केसी पुनः सडकमा
Posted on: July 30, 2016July 31, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन -१५ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध आठौँ पटक अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसी शनिबार आफ्ना समर्थकका साथमा प्रदर्शन गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका डा‍‍ केसीका समर्थकले स्थास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका बेथिति निम्त्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सक्रिय रहेको भन्दै उनीविरुद्ध नारा लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका […]
अनशन सकेको हप्ता नपुग्दै डा केसी सडकमा
Posted on: July 30, 2016July 30, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – १५ । अनशन सकेको केहि एक हप्ता नपुग्दै डा गोबिन्दकेसी सडकमा ओर्लिएका छन् । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग गर्दै आएका डाक्टर केसीका समर्थकले संसदमा ज्ञापनपत्र पेश पेश गर्ने भएका छन् । शनिबार दिउसाे माइतिघर मण्डलाबाट सुरु भएकाे पदयात्रा नयाँबानेश्वर पुग्नेछ । डा। गोविन्द केसी अलायन्सले आयोजना गरेको र्‍यालीमा डा […]
भोला रिजालको नेतृत्वमा आएका डाक्टरहरुले सडक र बगैंचामा जे गरे
Posted on: July 27, 2016July 28, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
डाक्टर गोविन्द केसीले आषाढ २६ गते आफ्नो ८ औ अनशन सुरु गरे । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिहं कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने लगायत अन्य चार बुँदे माग राखेर उनी अनशन सुरु गरेका थिए । डा केसी अनशन सुरु गर्नु पूर्व अनशनको सर्मथन र विरोधमा सोसिल मिडियामा ट्रेन्डिङ नै भयो । यता टिचिङ अस्पतालले उनको अनशनलाई हस्तक्षेप गर्न खोज्यो […]
यसरी ताेडे डा केसीले अनशन
Posted on: July 25, 2016July 26, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – १० । मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै आठौं पटक अनशन बसेका डा. केसीले १६ औं दिनमा अनशन तोडेका छन् । सरकारी वार्ता टोलीसँग हिजो राति ४ बुँदे सहमति भएको थियो । शिक्षण अस्पताल महाराजञ्जमा उपचारको लागि आएका सिन्धुपाल्चोकका ५ वर्षीय सरोज नेपाली, सिराहाबाट छोराको उपचार गर्न आएकी अनिता यादव […]
युवाहरु जाग्नु पर्छ भन्दै डा केसीले अनशन ताेडे फाेटाे फीचर
Posted on: July 25, 2016July 25, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – १० । डाक्टर गोविन्द केसीको १६ दिन लामो अनशन तोडिएको छ । सोमबार टिचिङमा भिक्षु छेवाङ नर्वु लामा सरकारी वार्ता टोलीका सयोजक सेनेन्द्र राज उप्रेत्ती र अर्थोपेडिकका विरामी सरोज नेपालीले केसीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका छन् । प्रस्तुति/तस्विरः कञ्चन न्याैपाने/गगन थापा
डा केसीकाे अनशन ताेडियाे
Posted on: July 25, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – १० । डाक्टर गोविन्द केसीको १६ दिन लामो अनशन तोडिएको छ । सोमबार टिचिङमा भिक्षु छेवाङ नर्वु लामा सरकारी वार्ता टोलीका सयोजक सेनेन्द्र राज उप्रेत्ती र अर्थोपेडिकका विरामी सरोज नेपालीले केसीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका छन् । केसीले अख्तिायारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने सहित ४ बुँदे माग सहित विगत १६ दिन देखि […]
सरकार र डा. केसीबीच चारबुँदे सहमति आजै अनसन तोड्ने
Posted on: July 25, 2016July 25, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
साउन १० । सरकार र १५ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । आइतबार राति अबेर डा. केसीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले आजै अनसन तोड्न भएका छन् । डा. केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच लगातार भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो । सहमतिको मस्यौदा लिएर डा. केसीका प्रतिनिधि शिक्षण […]
गोविन्द केसीलाई ओलीले पूर्वाग्रही देखेपछि….
Posted on: July 24, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई पूर्वाग्रहीको संज्ञा दिएका छन् । सत्याग्रह गरेको भन्ने मान्छेले पूर्वाग्रह राख्न नहुने भन्दै उनले केसीलाई सत्आग्रहमात्र राख्न आग्रह गरे । केसीको आमरण अनसनबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले उचित माग पूरा गरिने तर पूर्वाग्रहलाई सम्बोधन गर्न नसकिने जनाए । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र मनमोहन मेमोरियल मेडिकल […]
डा केसीको समर्थनमा हजारौँ सडकमा, नेतादेखि कलाकारसम्म
Posted on: July 23, 2016July 23, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
शब्द/तस्विरः गगन थापा/नेपाल अाज डा.केसीको आमरण अतनसनले आज १३ दिन छोएको छ । हिसिला यामि तथा कलाकार निर्देशक निश्चल बस्नेतलगाएत हजारौँ युवाहरु डा गोविन्द केसीको समर्थनमा सडकमा उत्रिएका छन् । शनिवारको जुलुस माइतीघरबाट बानेश्वर तर्फ बढिरहेको छ । समर्थनमा एतिहासिक र्यालीको आयोजनामा नायिका रेखा थापा, ऋचा शर्मा र केकी अधिकारीलगायतका कलाकारले सहभागिता जनाएका छन् । […]
डा.केसीलार्इ कलाकारकाे समर्थन
Posted on: July 23, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – ८ । डा.केसीको आमरण अतनसनले आज १३ दिन छोएको छ । निजी मेडिकल कलेजका महामाफिया लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउदैँ उनी यो आठौँ पटक आमरण अनसन बसेका हुन् । नेपाली चलचित्र उद्योगका तीन चर्चित नायिका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा माइतिघरमा निक्लिन लागेको विशाल प्रदर्शनीमा सहभागी हुने भएका छन् । उनीहले डा. केसीको मागमा […]
माइतीघरमा गोविन्द केसीको पक्षमा प्रर्दशन
साउन – ८ । काठमाडौंको मइतीघर मण्डेलामा आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा प्रर्दशन हुँदैछ । मेडिकल माफियालाई प्रश्रय दिएको भन्दै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित असार २६ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका केसीका पक्षमा प्रर्दशन हुन लागेको हो । केही दिन पहिले डाक्टर भोला रिजालको नेतृत्वमा सोही ठाऊंमा निजी मेडिकल कलेजले केसीका विरुद्ध […]
केसीका प्रतिनिधिसँगको बैठक असफल पुनः बैठक बस्दै
Posted on: July 22, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – ७ । सरकार र डा गोविन्द केसी प्रतिनिधिबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिहान ११ बजेबाट बसेको दोस्रो चरणको वार्ता विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै स्थगित भएको छ । सरकारी वार्ता टोली संयोजक एवम् स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले केही विषयमा गाँठो फुकाउनका लागि विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पुनः अर्को चरणमा वार्ता गर्ने सहमति भएको जानकारी […]
केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीचको वार्ता
Posted on: July 21, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
साउन – ६ । अनशनरत चिकित्सक गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच बिहिबार वार्ता भएको छ । वार्ता सकारात्मक भएको बताइएको छ । वार्तापछि केसीका प्रतिनिधि डा. जीवन क्षेत्रीले वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको जानकारी दिए । तर यो वार्ता निर्णयक नभएका उनले बताए । केसी आफैंले त्यसमा के प्रतिक्रिया जनाएपछि मात्र थप कुराकानी अगाडि […]
डा गाेबिन्द केसी र सरकारी टाेलीबीच बार्ता हुँदै
साउन – ६ । बाह्र दिनदेखि विभिन्न माग राखी अनशनरत् डा केसी र सरकारी वार्ताटोलीबीच केही बेरमा वार्ता हुदैछ । सरकारले केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय संवाद टोली गठन गरेपछि उक्त टोली आज त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल पुगी केसीसँग वार्ता गर्ने भएकाे छ । सरकारी टोलीलार्इ स्वास्थ्य […]
डा केसीको समर्थनमा धनगढीमा बृहत् -याली
Posted on: July 20, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – ५ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा समग्र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै आमरण अनशनमा बस्नुभएका डा गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बुधबार धनगढीमा बृहत् -याली गरिएको छ । स्थानीय एलएन चोकबाट सुरु भएको -याली जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर टुङ्गिएको थियो । -यालीमा प्राध्यापक, व्यापारी, समाजसेवीलगायतको सहभागिता थियो । रासस
इमानका लागि सडकमा आएको छु
Posted on: July 20, 2016July 22, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
म भोला हुं
गोविन्द केसीलाई आमरण अनसनका लागि उचालेर गगन थापा कता हराए ?
Posted on: July 19, 2016July 19, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
गोविन्द केसी अनसनमा बस्दै गर्दा काँग्रेस नेता एंव सभासद गगन थापाले केसीका पक्षमा स्टाटस लेखे । स्टाटसमा उनले मेडिकल माफियाविरुद्धको केसीको अभियानको प्रशंसा गरे । केसीको पक्षमा स्टाटस लेख्ने हजारौं छन् । गगनले स्टाटस लेखेरमात्र पुग्दैन । बल गगनहरुको कोर्टमा पुगिसकेको छ । केसीको माग छः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध […]
लोकप्रिय समाचार ताजा खबर	भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन मानवअधिकार आयोगको निर्देशन
तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अपिल
अचानक राष्ट्रपति पुगिन् दलबलसहित भक्तपुर र ललितपुर दरबार स्क्वायर
‘मुस्लिमका मागमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ’
राष्ट्रिय स्थार्थलार्इ केन्द्रविन्दुमा राख्न परराष्ट्रमन्त्रीकाे निर्देशन
नयाँ शक्ति र फोरम नेपालले एकल चुनाव चिन्ह
पाँच लाख युवालार्इ रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि शत्प्रतिशत साक्षरतासम्म, यस्ताे छ कांग्रेसको घोषणापत्र
राजस्व छली गरी लुकाई राखेको आईफोनसहित एक पक्राउ
सामाखुसीमा भिषण आगलागी, नियन्त्रण लिने प्रयास जारी
जाजरकोटमा प्रमुख दलले स्थानिय तहका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाए